Ithuluzi Magic - isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi izinqubo okumelwe
Impilo, Ukudla okunempilo
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ngokuvumelana dieticians ukunikeza ngempumelelo kwesisindo Imiphumela ngaphandle kokudala phi hlungu. Kucishe ayiqukethe calories, kanye normalizes umzimba. Kwesinye isikhathi abantu baze bathi ayenazo 'ikhalori omubi ", kusho ukuthi-ke kunikeza amandla emzimbeni esingaphansi ichithwa ukucutshungulwa yayo. Ngakho-ke, indlela yokudla ehambisana nempilo abaningi kangaka ngenkuthalo ukusebenzisa isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi isisindo ukulahleka.
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kuyinto ezifanele ukusetshenziswa ku zonke izinhlobo ngokuphelele. imbewu yayo asetshenziswa condiments, amaqabunga neziqu kungenziwa kudliwa eluhlaza, futhi impande nge Isiqu angapheka ubhake. Futhi akudingekile ukuba sisebenzise ngesikhathi ukudla kuphela, sekukuhambela kahle inyama, izinkukhu, inhlanzi, ukudla kwasolwandle kanye amakhowe. Inhlanganiso yocezuningi wabhala mayelana amandla okwelapha isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi futhi wakhuluma mayelana nokusebenzisa leso seluleko balahle izifo. ukusetshenziswa kwalo njalo kunomphumela okubuyisela, ekuvuseleleni futhi ahlanzwe emzimbeni. Lesi simila kwandisa ukusebenza kahle, kuthuthukisa ubuthongo futhi uthulisa impumuzo.
Kabanzi fresh isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi juice isisindo ukulahleka. Yena Kunconywa iziguli isifo sikashukela nokukhuluphala ngokweqile, kanye nezifo zesikhumba. Lokhu juice has laxative eside futhi ubungozi isisu normalizes umzimba kubambezela izinqubo ukuguga emzimbeni futhi ahlanze ke ubuthi. I elikhulu kuyinsakavukela nsuku kokuthola juice 100 ml.
isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi -sok exutshwe isipuni uju kumele kuthathwe ngaphambi kokudla ukucindezela iphango. Iphinde kuqinisa amasosha omzimba futhi kujwayeleke ukugaya.
juice -upotreblenie noma fresh umoba ka isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kusiza ukuqeda isisindo okweqile, ngaphandle kokulahlekelwa injabulo ekuphileni.
-Uma baphuze ingxube isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi juice nge ayo ka dandelion kanye sembabazane, lokhu kuzosiza ahlanze igazi , abaqede laba izifo zesikhumba.
Abesifazane abaningi bathanda ukudla isaladi ka isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi isisindo ukulahleka. Iqukethe inqwaba namaminerali abalulekile ngoba umzimba - zinc, insimbi, potassium, i-calcium, i-magnesium, i-phosphorus, namavithamini C, E, A no PP. Ngenxa yalesi ngokuchichima izakhi ke kuye kwaba nomphumela omuhle empilweni izinwele, isikhumba namehlo. Ngesonto elilodwa, ungalahlekelwa isisindo ngu amakhilogremu amabili lapho ukudla eyodla isaladi "Slim" njalo ebusuku. iresiphi sakhe silula. Kufanele kube on a grater indawo grate le isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi impande (ungakwazi Isiqu), turnips kanye izaqathe. Lokhu zonke inkathi amafutha yemifino, usawoti bese uthele ijusi lemon. Ngenxa yalokho, i-isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi isisindo ukulahleka siyasebenza kakhulu.
Uma ungake nje ukugcina ukudla, khona-ke thatha uqaphele ukuthi isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ukuze inyama izitsha kufanele kungezwe ngempela. Kuyasiza ukucubungula ukudla esindayo, ikhuthaza ukukhululwa of juice esiswini, kuvimbela izinqubo abolile e pheshana emathunjini bese kunciphisa ukunqwabelana igesi emathunjini. Enye indlela ukusebenzisa isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi isisindo ukulahleka - Ukudla ku isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi isobho. Indlela ulula, futhi lapho kungaba kakhulu ngendlela kunesidingo. Izithako: 300 amagremu isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi (ungathatha amaqabunga, sifanamsindvo, izimpande noma konke ndawonye), 4-5 utamatisi, 500 amagremu iklabishi 2 bell pepper. Utamatisi neklabishi kungathatha ngefomu okusemathinini. Konke lokhu inqanyulwa bafakwa emanzini abilayo bese ukuphela imizuzu 10 phezu ukushisa eliphezulu ke phezu ukushisa low kuze ithenda. Ekupheleni ngokuwa elele fake imifino poshinkovat, amboze uvalwe ngesivalo wasiqashisa yenza.
Uma wenza kanjalo udle isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ukunciphisa umzimba, ungakhohlwa ukuwondla abawuthandayo indoda. Ngoba abantu, lokhu zemifino nje izakhiwo imilingo, kuyinto aphrodisiac enamandla (yenyusa ubungqabavu futhi sithuthukisa potency), kanye nokusebenzisa kwayo okuhle nokuvinjelwa wendlala (lokhu kuyinto enhle ukuba ulidle kanye apula in ifomu yashizi).
Izinzuzo amagilebhisi, kanye kungani abakwazi ukuthi bayahlukunyezwa
Izakhiwo ewusizo oats
Lengetiwe 'E', elimazayo futhi iphephile
Isinkwa ne bran - kungcono esihlwabusayo futhi unempilo
Ukufunda artichoke, izakhiwo ewusizo futhi izicelo
Buckwheat kuqinisa noma obuthaka ukuba ahlanganyele? ukusetshenziswa Pediatric noma imithi yolunye uhlobo
Abadlali Russian: "Umthetho wokuqala we-Queen" (movie)
Appetizers Cold zezinhlanzi: zokupheka best futhi ikakhulukazi ukupheka
Dominican Republic. Izibuyekezo abonisa izinga eliphezulu lokutholakala kwe-
Isichazamazwi Culinary. Sauté - ke ...
Abaculi abangamaGreki: izinganekwane futhi zanamuhla
Kuyini kiberbulling? bengena ezingosini zayo Inthanethi kanye kiberbulling
Indlela ukuhlanza Cutlery wenza nickel esiliva ekhaya
Izimfihlo zobuhle: izinqubo eziningana zamaminithi amahlanu